Banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Bangaladeesh - Horseed Media
Banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Bangaladeesh December 13, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogle
Waxaa maanta oo Khamiis ah banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen caasimada dalka Bangaladeesh ee Dhaka, banaanbaxan ayey soo abaabuleen mucaaridka dalkaasi.
Banaanbaxan maanta dhacay ayaa ah kii labaad oo noociisa ah oo ay mucaaridka dowlada Bangaladeesh qabtaan muddo todobaad gudaheed ah.
18 urur oo mucaarid ah ayaa ku baaqay maanta shaqo joojin dalka oo dhan ah, ayadoo dadka mudaharaadayey ay cagta mariyeen dhamaan dukaamadii iyo goobihii kale ee ganacsiga ee ayagu diiday in ay shaqo joojinta ka qeyb qaataan. Inta badan xarumaha Ganacsiga ayaa maanta xirnaa.
Mucaaridka Bangaladeesha ayaa codsanaya in sanadka soo socda ee 2013 ay awooda dalkaasi la wareegto dowlad Kumeelgaar ah oo sii diyaarisa Doorashada lagu wado inay dalkaasi ka dhacdo 2014ka.
Horey ayey caadi u ahayd kahor intaan doorashada la gaarin in xilka awooda lagu wareejiyo dowlad kumeel gaar ah oo doorashada soo diyaarisa, balse arrintan ayaa sanadkan waxaa bedalay dowlada ay hogaamiso Raysalwasaare Hasina oo ayadu sheegtay inaysan awooda ku wareejin doonini maamul kumeelgaar ah, kadib markii Maxkamada sare ee dalkaasi ay go’aan kasoo saartay sanadkii hore in maamulka kumeelgaarka ah ee xiliyada doorashada la joojiyo. Isla markaana maamulka markaasi jooga uu doorashada soo diyaariyo arrintan ayey si weyn uga soo horjeesteen xisbiyada mucaaridka ah.
Mucaaridka ayaa sheegay in aan la bedali karin Sharcigii hore ee awooda xiliyada doorashada ku wareejinayey maamul kumeelgaarka ah, waxayna sheegeen in dowlada hada joogta aan lagu aamini karin dhaqaalaha dalka iyo waliba diyaarinta doorasho xalaal ah, ayagoo sheegay in arrintan ay dowladu wado irida u furi doonto inay ku shubato xukuumada hada joogta doorashada soo socota.